Uluhlu lokufunda nokubhala nolwandle luyintloko kwizizukulwana zethu kunye nezizayo
Yinyaniso yokuba uye wakuva ngaphambili, kodwa ivelisa kwakhona: izazinzulu ziye zenza imephu engaphezulu kwenyanga, iMars, kunye neVenus kunokuba ziphantsi komhlaba wonxweme. Kukho isizathu, nangona kunjalo, ngaphandle kokungazibandakanyi kwi-oceanography. Kunzima kakhulu ukubeka imephu ebusweni bomhlaba wonxweme, ofuna ukulinganisa iimpazamo ezibizayo kunye nokusebenzisa i- sonar kwiindawo ezikufutshane, ngaphezu kommandla wenyanga esondeleyo okanye iplanethi, enokuthi yenziwe ngu-radar ukusuka kwi-satellite.
Ulwandle lonke luphepheni, lukwisisombululo esiphantsi (5km) ngaphezu kweNyanga (7m), iMars (20m) okanye iVenus (100m).
Akufuneki ukuba, Ulwandle lwasemhlabeni alubonakali. Oku kunzima kubaososayensi kwaye, ngoko ke, ummi ophakathi ukuqonda ngokucacileyo le mithombo enamandla kunye ebalulekileyo. Abantu bafuna ukuqonda impembelelo yabo elwandle kunye nefuthe elwandle kuwo - abemi bafuna i-ocean literacy.
Ngo-Oktobha 2005, iqela lemibutho kazwelonke lanyathelisa uluhlu lwemigaqo-mithetho engama-7 kunye nemigqaliselo engundoqo ye-Ocean Science Literacy. Injongo yoLwazi lokuLwazi lokuBhala uLwazi lokuFunda uLwazi lokuFunda uLwazi lokuFunda uLwazi lokuFunda uLwazi lokuFunda uLwazi lokuLwazi lokuFunda uLwandle (Ocean Literacy) luphindwe kathathu: ukuqonda inzululwazi yolwandle, ukuthetha ngolwandle ngendlela enentsingiselo kunye nokwenza izigqibo ezinolwazi kunye nezixanduva malunga nomgaqo wolwandle Nazi iinqununu ezi-7 eziyimfuneko.
1. Umhlaba unomnye oLwandle oluLwandle olunamanzi amaninzi
Umhlaba unamazwekazi asixhenxe, kodwa ulwandle olunye. Ulwandle aluyona into elula: ifihla iintaba zeentaba kunye nezinye iindawo ezinqabileyo, kwaye iqhutywe yinkqubo yamanzi kunye namanxuwa amaninzi.
Kwi-tectonics yamacwecwe , iiplani ze-oceanic ze-lithosphere zidibanisa intsimbi ebandayo kunye neengubo ezitshisa ngaphezu kwezigidi zeminyaka. Amanzi olwandle anxulumene namanzi amanzi esiwasebenzisayo, axhunyiwe kuwo ngomjikelezo wamanzi wehlabathi. Nangona kunjalo kunkulu, kunjalo ulwandle luphelile kwaye izibonelelo zalo zinemiqathango.
2. I-Ocean kunye noBomi kuLwandle oluBumba iiMpawu zeMhlaba
Ngexesha le geologic, ulwandle lubusa umhlaba. Uninzi lwamatye avulekileyo kumhlaba lubekwe ngaphantsi kwamanzi xa izinga lamanzi liphezulu kunamhla. I-Limestone kunye ne-chert yimveliso yezinto eziphilayo, ezidalwe kwiimpawu zobomi bezilwandle. Kwaye ulwandle lubumba unxweme, kungekhona nje kwiintshukumo kodwa kumsebenzi oqhubekayo wokukhukhula kunye nokuthunyelwa ngamaza kunye namanxuwa.
3. I-Ocean iyimpembelelo enkulu kwiMimozulu kunye nezulu
Enyanisweni, ulwandle lulawula imozulu yehlabathi, ukuqhuba ezintathu ijikelezo zehlabathi: amanzi, ikhabhoni namandla. Imvula iphuma kumanzini olwandle aqhutywe, ahanjiswe nje ngamanzi kodwa amandla alanga awathabathela elwandle. Izilwanyana zaselwandle zivelisa ininzi ye-oksijini yehlabathi; Amanzi olwandle athatha isiqingatha se-carbon dioxide efakwe emoyeni. Kwaye iindawo zamanzi eziselwandle zifudumeza zifudumale ukusuka kwiindawo ezitshisayo eziya kwizibonda-njengengqungquthela yokujika, iimozulu iyashintsha.
4. I-Ocean yenza umhlaba ube ngumsebenzi
Ubomi olwandle lwalupha umoya wonke umoya we-oksijini, ukuqala kwi-Etero Proterozoic yeebhiliyoni zeminyaka edlulileyo. Ubomi ngokwabo kwavela oselwandle. Ukuthetha nge-Geochemically, ulwandle luye lwavumela umhlaba ukuba ugcine ukunikezelwa kwawo okuxabisekileyo kwe-hydrogen ekhutshwe ngendlela yamanzi, kungaphumeleli kwithuba elingaphandle njengoko kungenjalo.
5. I-Ocean ixhasa ulwahlulo olukhulu lwezoBomi kunye ne-Ecosystems
Indawo yokuhlala elwandle inkulu kakhulu kuneendawo zokuhlala zomhlaba. Ngokufanayo, kukho amaqela amakhulu ezinto eziphilayo elwandle kunokuba umhlaba. Ubomi be-Ocean bubandakanya iindawo zokuhamba, abagijimi nabasemagqabini, kwaye ezinye izinto eziphilayo zixhomekeke kwiimveliso zamachiza ngaphandle kwegalelo elangeni. Nangona kunjalo ininzi yolwandle yintlango ngelixa iindawo ezisemaphandleni kunye nemifula-zombini iindawo ezibucayi-zixhasa iindawo ezininzi zobomi behlabathi. Kwaye iindawo ezinxweme ziqhayisa iindidi ezininzi zemimandla yokuphila esekelwe kumanxweme, amandla okutshisa kunye namanzi aphantsi.
6. I-Ocean kunye nabantu Abaxhunyiwe ngokungaqhelekanga
Ulwandle lusinika izixhobo kunye neengozi. Ukusuka kuso siphucula ukutya, amayeza kunye neemaminerali; ishishini lithembela ezindleleni zolwandle. Uninzi lwabantu luhlala kufuphi nalo, kwaye luyinto ekhangayo yokuzonwabisa.
Ngokuphambene naso, iziphepho ze-ocean, iitsunamisi kunye noshintsho lwamanxweme zonke zisongela ubomi bamanxweme. Kodwa ke, abantu bachaphazela ulwandle ngendlela esisebenzisa ngayo, sitshintsha, siyihlambele kwaye siyayilawula imisebenzi yethu kuyo. Le yimiba echaphazela bonke oorhulumente nabo bonke abemi.
7. I-Ocean ikhulu kakhulu engachangekanga
Kuya kuxhomekeka kwisisombululo, kuphela .05% ukuya kwi-15% yolwandle lwethu luye lwahlolisiswa ngokubanzi. Ekubeni ulwandle lu malunga ne-70% yomhlaba wonke, oku kuthetha ukuba u-62.65-69.965% weMhlaba wethu awunakucatshulwa. Njengoko ukuthembela kwethu elwandle kuyaqhubeka kukhula, isayensi yolwandle iya kubaluleke ngakumbi ekulondolozeni impilo yolwandle kunye nexabiso, kungekhona nje ekuzaliseni iinqwenelo zethu. Ukuphonononga ulwandle kuthatha iitalente ezininzi ezahlukeneyo, i- biologists , iikhemistri , ochwepheshe, abaprogram, ii-physicists, iinjineli kunye ne- geologists . Kuthatha iintlobo ezintsha zezixhobo kunye neenkqubo. Kwakhona kuthatha iingcamango ezintsha-mhlawumbi zakho, okanye abantwana bakho.
I-Catalysts Inkcazo kunye nendlela abaSebenza ngayo
I-Henderson Hasselbalch Equation Inkcazo
Imibuzo Ephezulu Yendawo
I-Quantum Zeno Impact
Ukubala iiplanethi ezingabonakaliyo
AmaBanga aPhakamileyo okanye iiNkalo eziMngeni
Indlela Yokubuza Nokuphendula Umbuzo "Ngaba Unokuthetha IsiTshayina?"
IsiGeneralization - Ixesha loLwazi lokuSebenzisa izakhono kwiindawo eziMmandla
Indlela Yokucobisa Amehlo Akho kunye Nokunciphisa I-Eyestrain
Hector Lavoe - Iingoma ezigqwesileyo
Intetho yeYasashii ngesiJapan